Networking & Coordination News - CBI Myanmar
Networking & Coordination Related News
Invitation: Workshop for Myanmar NGO Contingency Plan Review and Modification (18.8.2019) at Central Hotel, Yangon
မြန်မာအန်ဂျီအိုများစုပေါင်းပြီး သဘာဝဘေး အရေးပေါ်တုန့်ပြန်မှုစီမံချက် (Myanmar NGO Contingency Plan) ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် မေလ တွင်စတင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ၂၀၁ဝခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် တကြိမ်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင် တကြိမ် စုစုပေါင်း(၂)ကြိမ် နေပြည်တော်တွင်ပြင်ဆင်မွမ်းမံခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ မြန်မာဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့ (Myanmar Preparedness Partnership) ၏အစီအစဉ်ဖြင့် ဘေးအန္တရာယ်အရေးပေါ်တုန့်ပြန်မှုစီမံချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
MNGOs & CBOs Bi-weekly Coordination Meeting on July 30, 2019 @ MNN Office
မြန်မာအန်ဂျီအိုနှင့် စီဘီအိုများ နှစ်ပတ်တကြိမ် စုံညီအစည်းအဝေးကို ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက် အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၁ဝနာရီတွင် MNN အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုတပတ်အစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အာမခံထားရှိခြင်း အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် အာမခံနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသိပညာပေးခြင်း၊ CB Insurance အကြောင်းမိတ်ဆက်ခြင်းတို့ကို CBI Insurance ကလာရောက် ရှင်းလင်းပြောကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
MNGOs & CBOs Bi-weekly Coordination Meeting on July 17, 2019 @ MNN Office
မြန်မာအန်ဂျီအိုနှင့် စီဘီအိုများ နှစ်ပတ်တကြိမ် စုံညီအစည်းအဝေးကို ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက် အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၁ဝနာရီတွင် MNN အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် လူကြီးမင်းတို့ အဖွဲ့အစည်းက အသိပေးတင်ပြလိုသည်များရှိပါက အစည်းအဝေးအစီအစဉ်တွင် ထည့်သွင်းပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
After completion of the project phase, the steering committee and all CBI staff decided to transform CBI intoalocal NGO and continued provision of building services. Within2years from July 2010 to June 2012 CBI was able to conduct 67 times of training in Yangon CBI centre with 1196 participants from INGOs and MNGOs.
CBI Networking & Coordination-3 [demo]
Invitation to Monitoring & Evaluation Training on December 18-20,2019
Invitation: Leadership & Team Management Training